कति छ नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्धता ? लगाउन तछाडमछाड – Mission Khabar
मिसन खबर १२ श्रावण २०७८, मंगलवार १६:०७
काठमाडौं । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न नेपालमा विभिन्न ३ देशमा निर्मित खोपलाई अनुमतिसहित प्रयोग गर्दै आइएको छ । पहिले पटक माघ १४ गतेबाट फ्रन्टलाईनरलाई लगाएर सुरु गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अहिलेपनि प्राथमिकताका आधारमा जारी राखिएको छ ।
पहिलो पटक भारतको सहयोगमा ल्याइएको कोभिसिल्ड खोप प्रयोगमा आएको थियो । पहिलो पटक खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जति मात्रामा जनसहभागिताको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा अनुसार सर्वसाधारणले खोप लगाएनन् । सुरुमा लक्षित वर्ग नै खोप लगाउन हच्किएका थिए । कोभिड खोप लगाएपछि देखिने साइड इफेक्टका कारण सर्वसाधारण त्रसित भए । खासमा अहिले पनि हामीले लगाएको खोपले कति काम गर्छ भन्ने प्रमाणित आधार भेटिदैँन । त्यसैले खोपको प्रभावकारीलाई लिएर एक खाले अन्यौल धेरैमा कायमै रहेको छ । अहिले पनि खोप लाउन जताततै भीडभाड देखिने गरेको छ ।
नेपालमा कति आयो खोप कतिले लगाए ?
अहिलेसम्म नेपालमा भारतबाट खरिद तथा अनदानमार्फत २१ लाख, चीनबाट अनुदानमा १८ लाख र सरकारले खरिद गरेको ४० लाख डोज मध्ये करिब १६ लाख नेपाल आइसकेको छ । बाँकी खोप आउने प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै, अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामार्फत १५ लाख डोज जोनसन एन्ड जोनसनको जानसेन खोप उपलब्ध गराएको छ । कोभ्याक्स सुविधाबाट पाउने भनिएको करिब १ करोड खोप मध्ये अहिलेसम्म ३ लाख ४८ हजार खोप आएको छ । बाँकी खोप छिट्टै आउने बताइएको छ । यस्तै, जापानबाट १६ लाख डोज खोप आउने क्रममा छ भने चीन सरकारले नेपाललाई १६ लाख डोज अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार मात्रै पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा राजदूत र्‍यान्डी बेरीले थप खोप तथा स्वास्थ्य सहायताका लागि अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्।
अब नेपालमा खोप अभाव नहुने दाबी गरेको सरकारले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई यहि आर्थिक बर्ष भित्र खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाललाई प्राप्त खोप मध्ये अहिलेसम्म कोभिसिल्डको पहिलो डोज मात्रै लगाउनेको संख्या १८ लाख २८ हजार ४ सय ८४ जना र यसको दोस्रो डोज समेत लगाएका ४६ हजार ३ सय ८ जना रहेका छन् । भने भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनको संख्या १५ लाख ५४ हजार ५ सय ५४ जना रहेका छन् । दोश्रो मात्रा लगाउने ६ लाख ९४ हजार ५ सय ५५ जना रहेका छन् । जोनजोस एण्ड जोनसोन खोप लगाउको संख्या २ लाख ४३ हजार ३ सय १५ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खोप सुरक्षित छन्, ढुक्क भएर लगाउनु : डा. उप्रेती
खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप पूर्णरुपमा विश्वास गर्न लायक भएको दाबी गर्छन् । अहिले प्रयोगमा आएको भारतको कोभिसिल्ड, अमेरिकाको जानसेन र चीनको भेरोसेल खोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रयोग योग्य भनेर प्रमाणित गरि सकेको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीनवटै खोपको अध्ययनपछि आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हुँदा कुनै निसंकोच प्रयोग गर्न उनको सुझाव छ । कोरोनाको बढ्दो महामारीसँगै खोपप्रति आकर्षण पनि बढ्दै छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सक्ने मात्राको खोप भित्रिएको छैन । त्यसैले चाहेर पनि सहज तरिकाले खोप लगउन पाइएको छैन ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा खोप भित्रिने क्रम बढे पनि लगाउन तँछाड मछाड गर्नुपर्ने अवस्था छ । खोप लगाएर असुरिक्षत बन्नुपर्ने अवस्थामा खोप प्रति शंका नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यद्यपी सबै नागरिक खोप लगाएर थप जोखिमबाट कसरी सुरक्षित हुने सरकारले समेत विश्वस्त पार्न सकेको छैन ।